whatsapp iri kukurumidza kubvisa bhatiri pane mamwe mafoni e-android
Kuru Nhau & Ongororo WhatsApp iri kukurumidza kubvisa bhatiri pane mamwe mafoni eApple
WhatsApp iri kukurumidza kubvisa bhatiri pane mamwe mafoni eApple
Kana iwe uchinge waona kuti bhatiri pane yako Android foni iri kukurumidza kudhizaina, inogona kunge iri imwechete app ndiyo ine mhosva. Munguva pfupi yapfuura, vanoverengeka maRedditors vakacherekedza kuti iyo WhatsApp mameseji app iri kushandisa yakawandisa bhatiri simba. Nepo vazhinji veavo vari kusangana nenyaya iyi vachishandisa foni yeOnePlus, mamwe mamodheru akanganiswa zvakare kusanganisira iyo Samsung Galaxy S10e, Galaxy S9, Google Pixel 3 uye Pixel 4. Mumwe OnePlus 6 mushandisi akanyora izvo mushure mekuvandudza kune iyo vhezheni yeWhatsApp iyo inoratidza iyo 'Vhura nezvigunwe zvemunwe' chimiro , foni yake yakamuratidza achishandisa WhatsApp kwemaawa mashanu nehafu kunyangwe aive akaivhura kweminiti imwe chete.
Zvichemo zvinogona kuwanikwa muchikamu chemashoko che iyo app & apos; s zvinyorwa muGoogle Play Store . Mumwe anonyorera paWhatsApp achishandisa Redmi Cherechedzo 5 Pro akacherekedza kuti bhatiri rake rakadzikira kubva pa74% kusvika pa19% nekuda kwemessage app & apos; s chiitiko kumashure. Vazhinji vanotaura kuti WhatsApp ine basa rekudya makumi matatu muzana kana kupfuura ehupenyu hwavo hwebhatiri kunyangwe vakapindura chete meseji kana maviri.
Vamwe vawana kumwe kubudirira nekubvisa iyo app uye kuisazve. Vamwewo vanoti kurodha pasi vhezheni itsva yeWhatsApp (vhezheni 2.19.325) yakawanikwa pano vakaita hunyengeri, asi vamwe vakati izvi zvinongopa gadziriro yenguva pfupi purogiramu isati yatanga kukweva bhatiri zvakare. Vashandisi vaviri vakapedza kuburitsa bhatiri nekutsigira yavo WhatsApp data, kusunungura iyo app kubva kufoni yavo, kurodha vhezheni yechinyakare yemeseji app uchishandisa iyo APK faira (2.19.291), uye kudzoreredza yakatsigirwa data. Anenge mumwe chete anonyorera paWhatsApp akawana kuti haafanire kudzoka vhezheni imwe chete. Akatsigira yake WhatsApp data, akabvisa app cache uye data data, uye akatakura vhezheni 2.19.325. Mushure mekudzorera data rake, zvese zvakagadziriswa.
Mhinduro yakanyanyisa ndeyekudzima WhatsApp uye chinja kune imwe mameseji chikuva seTeregiramu . Unogona kutarisa kana izvi zvichitodiwa nekuenda kuZvirongwa>Bhatiripane yako Android ruoko. Tinya pane matatu-bhatani kufashukira menyu pane yepamusoro kurudyi kwekona uye tinya paBhatiri kushandiswa. Pasi pemusoro wenyaya 'Kushandiswa kweBhatiri Kubva Kubhadharwa Kwakazara,' iwe unogona kuona kuti chikamui chebhatiri rako rekushandisa WhatsApp raive nebasa. Kana iyo nhamba ichiita senge yakanyanya kukwirira uchifunga kuti kangani iwe waishandisa iyo mameseji app, ungangoda kufunga imwe yambotaurwa workaround.
s9 + vs s10 +
nharembozha dzine ruzha rwakanyanya
iphone 12 pro max imba skrini
Samsung Galaxy S7 kumucheto vs Apple iPhone 6s Plus
Kwayedza Automation Kubatsira uye Kukanganisa
Maalbhamu kubva kumusoro maartist anonyangarika kubva kuApple Music: iguru kana isingashande algorithms?
Iwe unogona ikozvino kunyorera kuti uwane madhora makumi maviri nemashanu kubva kuApple & apos; s #batterygate kugadzirisa
Maitiro ekudzima Chrome tebhu mapoka grid kuona pane yako Android foni
Happy Wheels ongororo: ragdoll fizikiki yakanakisa inotarisana neropa uye gore
T-Mobile vs AT & T uye Verizon risingaperi 5G inoronga kuenzanisa kwemutengo
Inorova Solo3 mahedhifoni asina waya anowanikwa anosvika kumadhora zana nemakumi mana, Beats Studio 3 inowana madhora makumi manomwe emadhora